Nabu ubumqoka be-lockdown - Ilanga News
Home Izindaba Nabu ubumqoka be-lockdown
Nabu ubumqoka be-lockdown
Ungoti ucacisa ngokubaluleka kokuhlaliswa kwabantu emakhaya
Uhlelo olusheshayo lokuhlolela iCovid -19 lungeminye yemizamo kahulumeni yokuba kusheshe kubonakale labo asebethelelekile.
ESISAKUBONILE kuze kube manje kungamalangabi amancane, kwazise okukhulu yilapho kuseza ubuhanguhangu bomlilo wequbula njengoba siqhubeka ukuba bucayi isimo kuleli nakwamanye amazwe emhlabeni jikelele, ngenxa yokubheduka kwegciwane lokhuvethe eliwuqothizizwe, iCovid-19.
Lokhu kushiwo nguSolwazi Salim Abdool Karim ongusihlalo wethimba longoti abehlukene abeluleka abasekhaleni lempi elwa nalolu bhubhane kuleli.
USolwazi Karim ugcizelela ukubaluleka kweqhaza lesinqumo sikahulumeni sokumisa konke njengomzamo wokunqanda ukubhebhetheka kweCovid-19.
Okuhamba phambili ekuphawuleni kwakhe ngengozi yeCovid-19 uSolwazi Karim, wukuthi nxa kungase kunqanyulwe isigubhukane i-lockdown ezweni lonke ngokuxuba abantu abasengcupheni nabangekho engcupheni, abazobe behamba ndawonye ngamabhasi, amatekisi nezitimela lokho kungabeka izwe engcupheni yokuhlehlisela emuva yonke imizamo esiyenziwe kuze kube manje kanye nokusizakala esikutholile ngayo.
Babona isimo sisazokuba sibi kakhulu kuleli
Uthi selokhu kuvalwe yonke into kuleli kusukela mhla ka-26 kuNdasa (March) 2020, izinga lezibalo zabathelelekayo lehlile ukubhebhetheka ngamandla njengoba bese kungabantu abaphakathi kuka-60-70 abasha ngosuku okubikwa ukuthi bayatheleleka kanti kwamanye amazwe kakunjalo.
Lokhu kungase kusho ukuthi iNingizimu Afrika iyaphumelela ukulithiba ijubane leli gciwane elisabalala ngalo.
Embuzweni othi ngabe iNingizimu Afrika izophepha esimeni esisazoba sibi salolu bhubhane, uSolwazi Karim uthi qha – ngaphandle kokuba elakuleli linesimo esithile esilivikelayo esingekho kwezinye izindawo emhlabeni.
Umphakathi wonke usazokuba sengcupheni enkulu emuva kokuhoxiswa kwe-lockdown ikakhulukazi phakathi kwezinsuku eziwu-4 kuya kweziwu-7 ngaphambi kokuba izimpawu zeCovid-19 zivele obala, okusho ukuthi abantu bangalifafaza bengazi igciwane leli.
Ngokujwayelekile, igciwane lifafazeka ngokushesha okukhulu. Ukungenelela kukahulumeni kusinciphisile isivinini sokutheleleka, okuyinto enika iziphathima-ndla ithuba lokuvivela lesi simo.
Kudingeke ngani ukubambezela isikhathi sokuhoxisa i-lockdown?
• ukuze kuthitshwe isivinini sokufafazeka kwegciwane.
• iNingizimu Afrika inesibalo sonompilo abawu-28 000 abahambela umuzi nomuzi emiphakathini ehluphekayo ukuze kuhlolwe abantu nokuthola asebethelelekile.
• seziyatholakala izindlela ezintsha nezisheshayo zokuhlola.
• ukuze kutholakale izindlela ezintsha zokwelapha.
• ukuze kube nethuba lokwenza amalungiselelo osizo lwezempilo.
OSEKWENZEKILE KUZE KUBE MANJE
• ukufundisa umphakathi
• ukulungisa isibalo sama-laboratories
• ukuzivikela komphakathi
• ukushiya isikhala phakathi komuntu nomuntu nokuhlamba izandla njalo
• ukuvala izikole nokunciphisa isibalo sabantu abavunyelwe ukuba ndawonye
• ukuvala imingcele yabavela ngaphandle nabangena kuleli
Isigaba sesithathu: ukuvala yonke into (lockdown)
• Kuqiniswa izinyathelo zokunqamula ukuhlangana kwabantu endaweni eyodwa
Isigaba sesine: • Ukuqapha nokuthola asebethelelekile
• ukuhambela umuzi nomuzi ukuyohlola nokungena emgonqweni nokuthola abebe-kade behlangene nasebethelelekile.
Ngalokhu osekushiwo kwethenjwa ukuthi:
• ngoMgqibelo mhla ka-18 kuMbasa (April) kuyobe sekwazeka ukuthi izindlela zokuhlaziya isimo zishaya emhloleni noma qha;
• nxa imibandela yokuba kube ne-lockdown, njengokuthi uma abathelelekayo ngosuku kusukela kuqalwe ukuhlola mhla ka-10-16 kuMbasa, bevile ku-90, lokho kuyosho ukuthi mayiqhubeke i-lockdown, nokuthi nxa bewu-44 nangaphansi kwalokho, iyohoxiswa i-lockdown
• makulindelwe igebe elikhulu ezinguqukweni ezenzeka nsukuzonke zalabo asebethelelekile ngenxa yokuba sekuqale ukuhlola
• ukuqeda isigubhukane i-lockdown ku-yobhebhezela ukusabalala kwegciwane – ngakho ukuhoxiswa kwe-lockdown makwenzeke ngohlelo olubhekela izimo zomnotho eziphoqayo kube kucatshangwa nangokuphazamiseka komphakathi
• Izindawo elidlange kuzo igciwane
• ukuqapha isimo ukuze kuhlonzwe izindawo elidlange kuzo igciwane futhi ku-ngenelelwe kuzo
• ukuqaphela izindawo lapho kuqhubeka khona ukufafazeka kwegciwane
• ukulandelela lapho kuqubuka khona igciwane nokujuba amathimba okwenza lokho
• usizo lokwelapha
• ukubheka izibalo zabahaqekile nosizo oluhlinzekwayo
• ukulawula izimo zokuthinteka kwezisebenzi nokutheleleka kwazo
• ukwakha izibhedlela zesikhashana nokuhlaziya izimo ngokuphuthuma kwazo
• ukwandisa izibalo zemibhede yokulalisa abasezimweni ezibucayi kakhulu kanye nemishini elekelela ukuphefumula
• ukushonelwa nemiphumela yalokho
• ukukhulisa amalungiselelo okungcwaba
• imithetho yokusingathwa kwemingcwabo
• ukulawula izimo zomqondo nomphumela emphakathini
• Ukuqapha isimo
• ukuqapha ukusabalala kwegciwane
• ukugonywa kwabantu, uma imishanguzo yokugoma isikhona
• ukubheka izimo ezintsha zokutheleleka
• ukucima izimo ezivumbukayo ukuze ku-nciphe ingozi yokugwinywa yilolu bhubha-ne
Njengoba ekubekile ngamafuphi uDkt Zweli Mkhize ongungqongqoshe wezempilo kuzwelonke, udaba lweCovid-19 kalusiwona umsebenzi wodokotela nabahlengikazi kuphela kepha lungolwethu sonke kuleli zwe kunjalo nje izinyathelo zikahulumeni ukunweba nokuhoxisa isikhathi se-lockdown zisukela olwazini lochwepheshe emkhakheni wezamagciwane nezifo azidalayo kubantu.
UDkt Mkhize uncome ukuba wonke umuntu azigqoke izimfonyo (mask) ukuvikela ukuqhasha kwamathe nxa ekhuluma noma ethimula kumbe ekhwehlela. Lokhu uthi kuvikela ukuba osenegciwane angalisabalalisi nokuthi ongenalo angalitholi kalula.
Previous articleI-Covid19 imvulele ibhizinisi
Next articleowamaroma uphume phambili kwawokudlwengula